Istudiyo 7- 200 iimitha ukusuka elunxwemeni - I-Airbnb
Istudiyo 7- 200 iimitha ukusuka elunxwemeni
I-Studio 7 inegumbi lokuhlambela labucala, i-intanethi, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, i-smart TV, ikhitshi labucala elinomatshini wokwenza ikofu we-Nespresso, into yokufudumeza amanzi, i-toaster, i-microwave kunye nesitovu se-ceramic. Ikwahamba neveranda entle yaseAndalusian, indawo yokuhlamba impahla enomatshini wokuhlamba nowokomisa impahla, iayini kunye nebhodi yokuayinela iindwendwe (elona xesha lide lokuhlamba nelomileyo ngosuku). Ukuba ukwindawo enembali, awukwazi ukuhamba ngemoto okanye ngepaki. Indawo yokupaka engabhatalelwayo ikude ngeemitha eziyi-650, ibhatala indawo yokupaka ekumgama weemitha eziyi-165. Istudiyo ngasinye sinikezela ngenkonzo yokuhlaziya yasimahla eyi-1(enye) equka: Amanzi, iSumos, iibhotile ezimbini ezincinci zeCava, amaqebengwana, amaqebengwana/iibhari ze-cereal, itshokholethi, itshizi, i-ham, i-jam, ibhotolo, isonka ne-yoghurt.
Inombolo yomthetho: CTC-2020102460